आधा घन्टाको व्यायामले यसरी बढाउँछ तपाइको उमेर, जानी राखौ - ज्ञानविज्ञान
आधा घन्टाको व्यायामले यसरी बढाउँछ तपाइको उमेर, जानी राखौ
Large group of people stretching together. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url] [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786766][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/sport.jpg[/img][/url]
आधा घन्टाको शारीरिक गतिविधिले तपाईं आफूलाई स्वस्थ महसुस गर्न सक्नु हुन्छ । जसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । चिकित्सा क्षेत्रको प्रसिद्ध म्यागेजिन लसेन्टमा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार सातामा ६ दिन आधा घन्टाको व्यायाम गर्दा मुटु सम्बन्धी समस्या र कम उमेरमै हुने मृत्युको जोखिम कम हुन सक्छ ।
स्वस्थ रहन हामी अनेक उपाय अपनाउँछौं । घण्टौं व्यायाम गर्नेदेखि विभिन्न किसिमका डाइट खाने गर्छौ । तर, नतिजा चित्त बुझ्दो हुँदैन । तर क्यानडामा हालै सम्पन्न एक अध्ययनले घन्टौं व्यायामको साटो केवल आधा घन्टाको व्यायाम त्यो पनि सातामा ६ दिन गर्दा उमेर बढ्ने जनाएको छ ।
अध्ययनका अनुसार यदि सबै व्यक्तिले सातामा ६ दिनमात्रै ३० मिनेट व्यायाम गर्ने हो वा कुनै पनि किसिमको शारीरिक गतिविधि गर्ने हो भने संसारभर मृत्युदर कम हुन्छ । हरेक १२ मध्ये एक जनालाईं चाँडै मृत्यु हुनबाट रोक्न सकिन्छ र हृदयरोग हुने २० मध्ये एकको आशंका कम गर्न सकिन्छ । उक्त अध्ययन रिपोर्टका अनुसार शारीरिक गतिविधि अन्तर्गत जिम जानु, कार्यस्थलको लागि पैदल हिँड्नु र घरको काम समावेश छन् ।
अनुसन्धानकर्ताले १७ देशका एक लाख ३० हजार मानिसमाथि अवलोकन गरेका थिए । जसमा भारतका २४ हजार मानिस सहभागि थिए । अध्ययन टोलीको प्रमुख तथा क्यानडाको सेन्ट पल्स अस्पतालका प्रोफेसर स्कट लियरका अनुसार धेरै व्यायामले हृदय रोगको खतरालाई कम गर्ने बताए । अध्ययनमा सहभागि भारतीय अनुशन्धानकर्ता र मद्राश डायबीटिज रिसर्च फाउन्डेशनका उपाध्यक्ष डा.आरएम अन्जानाले भारतको परिप्रेक्ष्यमा उक्त अध्ययन निकै प्रासंगिक भएको बताइन । घरमा काम गर्नु र कार्यस्थलको शारीरिक गतिविधिले पनि व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी पहिलो पटक दिनु राम्रो भएको बताइन् ।
WHO का अनुसार १८ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहकाले सातामा कम से कम एक सय ५० मिनेटसम्म मध्यम किसिमको ऐरोविक गर्नुपर्छ । यसका साथै कम से कम दुई पटक मांसपेशीलाई बलियो बनाउने किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ । उक्त अध्ययनमा एक लाख सात हजार मानिसले यो गाइडलाइनको पालना गरे र ती मध्ये तीन दशमलब आठ प्रतिशतलाई मात्र मुटुसँग सम्बन्धित रोग देखियो । यसैगरी गाइडलाइन पालना नगर्ने २३ हजार मानिस थिए, जसमा पाँच दशमलब प्रतिशतलाई मुटु सम्बन्धित रोग देखियो । जो एक्सरसाइज र शारीरिक गतिविधिमा सहभागि भए उनीहरूको मृत्युको सम्भावना चार दशमलब दुई प्रतिशत मात्र थियो भने शारीरिक गतिविधि र एक्सरसाइज नगर्नेमा मृत्युको जोखिम बढी थियो ।
Topics #अध्ययन #आधा घन्टा #उमेर #व्यायाम
Don't Miss it यस्ता छन्, करेलाको जुस पिउँनुका फाइदा
Up Next सफल बन्नका, लागि यी उपाय अपनाउनुहोस
पालुंगो सागको यस्ता चमत्कारी फाइदाहरु जुन हामीलाई थाहा नहुनसक्छ जान्नुहोस्
पालुंगोको तरकारी सामान्यत रुचिकर तथा छिट्टै पच्ने खालको हुन्छ । यसको बीउ शीतल दिने खालको हुन्छ । श्वाश फेर्न कठिनाइ…
अब महँगो शुल्क तिरेर कुनै ब्युटिपार्लर धाउनु पर्दैन,घरेलु विधिबाट केस मुलायम र चम्किलो बनाउन सकिन्छ
ब्रस या अन्य कुनै साधनको प्रयोगविना आफ्नै औँलाका माध्यमबाट तेल लगाउन सक्नुहुन्छ । औँलालाई तेलमा डुबाएर केसको सबैतिर लगाउनुपर्छ ।…
यि हुन विश्वकै सबैभन्दा महंगा फल जसकाे मुल्य सुनेर तपाइ छक्क पर्नु हुनेछ
तपाईले महंगा घर, मोबाइल फोन, कार देखि महंगा जनवारका बारेमा सुन्नुभएको होला । तर महंगा फलपुलका बारेमा कहिलै सुन्नुभएको छ…
उमालिएको चामलको पानीलाई प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य राम्रो – विधि सहित
उमालिएको चामलको पानी स्वास्थ्य लाभको बारेमा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो जति स्वास्थ्यको लागी फाइदायुक्त छ त्यति…
विवाह पछि महिलाको तौल बढ्ने कारण, यस्ता छन्
१. सामाजिक दबाब कमजोरः विवाह अघि आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु सामाजिक दबाबका रुपमा लिइन्छ । तर, विवाहपछि यो प्रेसर स्वतः…
खाली पेटमा दूधमा तुलसीको पात मिलाएर खाएमा फाइदा, तर तुलसीको पात चपाउनुहुँदैन – जान्नुहोस् के गर्ने के नगर्ने ?
अहिले मौसम परिवर्तनको समय छ। प्राय धेरै मानिसलाई रुघा लाग्‍ने र ज्वरो आउने गरेको हुन्छ । तर हामी मेडिकलबाट तुरुन्तै…
यी कुरा नगर्नुहोस् राती सुत्नु अघि पार्टनरसँग
१) गल्तीको कुरामात्र नदोहोराउनुहोस्ः यदि तपाईं राती सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नी प्रेमिकालाई उनको पूरा दिनको गल्तीबारे सुनाइरहनुहुन्छ भने उनी तपाईंसँग बोर…
कलेजो स्वस्थ राख्ने उपाय के हुन् ? जान्नुहोस
रक्सी नियामित प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो कलेजो बिग्रिदै गरेको हेक्का पनि हुँदैन । कम्तीमा १० वर्षदेखि रक्सी नियमित सेवन…